Herin'ny Pentekosta an'ny Filazantsara - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-03 > Herin'ny Pentekosta
Pentekosta: tanjaka ho an'ny filazantsara
Nampanantena ny mpianany i Jesosy hoe: “Indro, Izaho mampitondra izay nampanantenain’ny Raiko ho aminareo. Fa mitoera ao an-tanàna mandra-pahazoany hery avy any amin’ny avo” (Lioka 24,49). Naverin’i Lioka ny fampanantenan’i Jesosy: «Ary raha teo aminy tamin’ny fisakafoana Izy, dia nandrara azy tsy hiala Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasan’ny Ray, izay efa renareo tamiko, araka izay nolazainy; fa Jaona nanao batisa tamin’ny rano, fa ianareo kosa hatao batisa amin’ny Fanahy Masina, rehefa afaka izany andro izany » (Asan’ny Apostoly 1,4- iray).
Ao amin’ny Asan’ny Apostoly no ianarantsika fa ny mpianatra dia nandray ny fanomezana nampanantenaina tamin’ny andro Pentekosta satria – natao batisa tamin’ny Fanahy Masina izy ireo, izay nanome azy ny herin’Andriamanitra. “Ary samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra, ka dia nitory tamin’ny fiteny samy hafa, araka izay nasain’ny Fanahy Masina holazaina taminy.” (Asan’ny Apostoly 2,4).
Ny Jiosy dia nifandray tamin'ny Pentekosta tamin'ny famindrana ny lalàna sy ny fanekena natao tamin'ny vahoaka Isiraely tao an-tendrombohitra Sinay. Noho ny Testamenta Vaovao dia manana fahatakarana feno kokoa isika anio. Mampifandray ny Pentekosta amin'ny Fanahy Masina sy ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny olona avy amin'ny firenena rehetra izay ao amin'ny fiangonany isika.
Voantso ho vavolombelona
Tsaroantsika tamin’ny Pentekosta fa niantso antsika ho olom-baovao Andriamanitra: “Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka-mpisorona, olona masina, olona nanan-karena, mba hilazanareo ny fahasoavan’Ilay niantso anareo ho ao amin’ny maizina. hazavana mahafinaritra »(1. Petrus 2,9).
Inona no tanjon’ny fiantsoana antsika? Nahoana Andriamanitra no nanendry antsika ho vahoaka hotompoina? Hitory ny fankasitrahany. Nahoana no omeny antsika ny Fanahy Masina? Mba ho vavolombelon’i Jesosy Kristy: “Ary hahazo ny herin’ny Fanahy Masina izay hilatsaka aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany” (Asan’ny Apostoly). 1,8). Ny Fanahy Masina no manome hery antsika hitory ny filazantsara, hitory ny vaovao mahafaly fa ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra ny olona noho ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny famindram-pony ary ny zavatra nataon’i Kristy ho antsika.
Nanao fanekena, fifanarahana, tamintsika Andriamanitra. Mampanantena antsika ny fiainana mandrakizay Andriamanitra, izay maneho ny fiandrasana tsy azo ihodivirana ny famonjena antsika (izany dia zo izay tsy mbola tanteraka ny fepetra). Ny fampanantenan’Andriamanitra no anjarany amin’ilay fifanarahana. Ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny Fanahy Masina no mampiavaka azy. Nantsoina sy nomena ny Fanahy Masina isika - eto ary izao no manomboka ny anjarantsika - mba ho vavolombelon’ny famindrampon’Andriamanitra izay tonga amintsika ao amin’i Jesosy Kristy Mpamonjy antsika. Izany no iraka nampanaovina ny fiangonana sy ny tanjony ary ny tanjona iantsoana ny mambran’ny fiangonan’Andriamanitra tsirairay, dia ny tenan’i Kristy.
Ny fiangonana dia miandraikitra ny fitoriana ny filazantsara sy ny fampianarana ny olona momba ny fanavotana izay novidina ho antsika tamin’ny alalan’ny soron’i Kristy: “Voasoratra hoe: Kristy hijaly sy hitsangana amin’ny maty amin’ny andro fahatelo; ary torina amin’ny anarany ny fibebahana ho famelan-keloka amin’ny olona rehetra. Hatrany Jerosalema no vavolombelon’izany ianareo » (Lioka 24,46-48). Nomena ny apôstôly sy ny mpino ny Fanahy Masina tamin’ny Pentekosta mba ho tonga vavolombelona nahazo hery an’i Jesoa Kristy.
Ny asa nanirahana ny fiangonana dia anisan’ny sary izay hazava amintsika amin’ny andron’ny Pentekosta. Amin'ny andro Pentekosta dia mankalaza ny fiandohan'ny Testamenta Vaovao manaitra isika. Heverintsika koa ny fanekentsika ara-panahy ho an’ny fianakavian’Andriamanitra sy ny fanavaozana tsy tapaka, ary koa ny tanjaka sy herim-po omen’Andriamanitra antsika amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Ny Pentekosta dia mampahatsiahy antsika fa ny Fanahy Masina dia mitarika ny Fiangonana amin’ny fahamarinana ary mitarika, manome aingam-panahy ary manome fitaovana ny vahoakan’Andriamanitra mba “ho tahaka ny endrik’ny Zanany, mba ho Lahimatoa amin’ny rahalahy maro Izy” (Romana). 8,29) ary mijoro ho antsika eo amin’ny seza fiandrianan’Andriamanitra izy (andininy 26). Toy izany koa, ny Pentekosta dia mety hampahatsiahy antsika fa ny Fiangonana dia mandrafitra ireo olona rehetra izay itoeran’ny Fanahy Masina. Isan-taona ny Pentekosta dia mampahatsiahy antsika mba hihazona firaisana ara-panahy amin’ny alalan’ny fatoram-pihavanana (Efes 4,3).
Mankalaza an’io andro io ny Kristianina ho fahatsiarovana ny Fanahy Masina, izay niarahany nandray tamin’ny fotoana samy hafa. Ny fiangonana dia tsy toerana iray ampianarana ny fitsipiky ny fiainana ara-pahasalamana sy tsara; Izy io dia misy mba hanambarana ny fankasitrahan’i Jesosy Kristy ary manantitrantitra indray hoe: “Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka-mpisorona, olona masina, olona ho anareo, mba hitory ny fahasoavan’izay niantso anareo ho Tompo. ny haizina ho amin’ny fahazavany mahagaga »(1. Petrus 2,9).
Na dia te ho tonga olona miova ara-panahy aza isika rehetra, tsy izany ihany no tanjontsika. Ny Kristiana dia manana iraka - iraka ampahatanjahan'ny Fanahy Masina. Manentana antsika hanambara ny Tompo Jesosy Kristy sy hitondra ny hafatra fampihavanana amin'ny alàlan'ny finoana ny anarany manerana an'izao tontolo izao.
Ny Pentekosta dia vokatry ny fiainana tarihin'ny Fanahy Masina - fiainana izay manambara ny fahamarinana, ny hery ary ny famindram-pon'i Jesosy Kristy. Ny fiainana kristiana mahatoky dia fijoroana ho vavolombelona momba ny filazantsara. Ny fiainana toy izany dia manaporofo, manambara ny marina, fa miasa ao amintsika Andriamanitra. Izy io dia fijoroana ho vavolombelona mandeha amin'ny filazan'ny filazantsara.
Fetin’ny fijinjana ny Pentekosta tamin’ny voalohany. Mandray anjara amin’ny fijinjana ara-panahy koa ny Fiangonana ankehitriny. Ny vokatra na vokatry ny asa nanirahana ny Fiangonana dia ny fampielezana ny filazantsara sy ny fitoriana ny famonjena ny olona amin’ny alalan’i Jesosy. “Atopazo ny masonareo, ka jereo ny saha, fa efa masaka hojinjaina izy”, hoy i Jesosy tamin’ny mpianany, fony izy ireo tany Samaria. Efa eto Jesosy dia niresaka ny amin’ny fijinjana ara-panahy izay ahazoan’ny olona ny fiainana mandrakizay: “Izay mijinja dia mahazo valim-pitia ka mamory voa ho amin’ny fiainana mandrakizay, mba ho faly izay mpamafy sy izay mijinja.” (Jaona. 4,35- iray).
Indray mandeha, dia nahita ny vahoaka i Jesosy, ka hoy izy tamin’ny mpianany: “Be ny vokatra, fa ny mpiasa no vitsy. Koa amin’izany mangataha amin’ny Tompon’ny vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra.” (Mat 9,37-38). Izany no tokony hanentanana antsika hanao ny Pentekosta. Tokony hisaotra an’Andriamanitra isika amin’ny fanampiana antsika hahita ny olona manodidina antsika ho vonona amin’ny fijinjana ara-panahy. Tokony hangataka mpiasa bebe kokoa isika, satria tiantsika ny hahazo bebe kokoa ny fitahiana avy amin’Andriamanitra. Tiantsika ny hanambaran’ny vahoakan’Andriamanitra ny soa azon’ireo izay namonjy antsika.
“Ny haniko”, hoy i Jesosy, “dia ny manao ny sitrapon’izay naniraka Ahy sy ny mahavita ny asany.” (Jaona 4,34). Izany no fiainany, ny sakafony, ny heriny. Izy no loharanon’ny fiainantsika. Izy no mofo ho antsika, dia ny mofon’ny fiainana mandrakizay. Ny sakafo ara-panahy ho antsika dia ny manao ny sitrapony, ny asany, dia ny filazantsara. Tsy maintsy manaraka ny dian’i Jesosy isika ka mamoaka ny fomba fiainany, raha mbola mitoetra ao anatintsika Izy. Tokony havelantsika hanatratra ny tanjony eo amin’ny fiainantsika izy ary hiaina araka ny tokony ho izy.
Hafatry ny fiangonana voalohany
Feno lahateny ara-pilazantsara ny bokin’ny Asan’ny Apostoly. Miverimberina hatrany ny hafatra ary mifantoka amin’i Jesoa Kristy ho Mpamonjy, Tompo, Mpitsara ary Mpanjaka. Na i Kornelio, kapiteny romana aza, dia nahafantatra ny hafatra. Ary hoy Petera taminy: Fantatrao ny teny famonjena izay nambaran’Andriamanitra tamin’ny Zanak’Isiraely: Izy no nitondra fiadanana tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy, ary Kristy no Tompon’izao rehetra izao. (Asan’ny Apostoly 10,36 Fanantenana ho an'ny rehetra). Nofintinin’i Petera ilay hafatra, izay efa niely be tokoa, hany ka fantatr’i Kornelio koa izany: “Fantatrareo izay nitranga eran’i Jodia, nanomboka tany Galilia, taorian’ny batisa izay notorin’i Jaona ny amin’ny nanosoran’Andriamanitra an’i Jesosy avy any Nazareta tamin’ny Fanahy Masina sy ny hery; nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon’ny herin’ny devoly izy, satria Andriamanitra nomba Azy. Ary izahay no vavolombelon’izay rehetra nataony tany Jodia sy tany Jerosalema.” ( Asan’ny Apostoly 10:37-39 ).
Nanohy nitory ny filazantsara i Petera tamin’ny filazana ny nanomboana an’i Jesosy tamin’ny hazo fijaliana sy ny nitsanganany tamin’ny maty, ary avy eo dia namintina ny asa nanirahana ny fiangonana: “Ary Izy nandidy anay hitory amin’ny olona sy hanambara fa Izy no notendren’Andriamanitra hitsara ny velona sy ny velona. ny maty. Ny mpaminany rehetra dia manambara Azy fa amin’ny anarany no hahazoan’izay rehetra mino Azy famelan-keloka » (Asan’ny Apostoly 10:42-43).
Koa mitory momba ny famonjena sy ny fahasoavana ary ny Jesoa Kristy isika. Eny tokoa! Izany no fitahiana lehibe indrindra azontsika hatramin’izay. Mampientam-po ny fahamarinan’ny famonjena antsika, ary tiantsika ny hizara izany amin’ny mpiara-belona amintsika mba hahazoan’izy ireo fitahiana mitovy amin’izany koa! Rehefa nenjehina ny fiangonana noho ny fitoriana ny hafatr’i Jesosy, dia nivavaka mba hahazoany fahasahiana izy ireo mba hahafahany mitory bebe kokoa! “Ary rehefa nivavaka izy, dia nihovitrovitra ny trano niangonany; ary feno ny Fanahy Masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana ... tamin'ny hery lehibe no nanambaran'ny Apostoly ny nitsanganan'i Jesosy Tompo, ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra » (Asan'ny Apostoly 4,31.33). Nomena azy ireo ny Fanahy Masina mba hahafahany mitory an’i Kristy.
Ho an'ny Kristiana tsirairay
Tsy ny apostoly ihany no nomena ny Fanahy na ny fiangonana vao tafaorina amin’ny fitambarany. Omena ny kristiana rehetra izay mino an’i Jesosy ny Fanahy Masina. Tokony ho fijoroana ho vavolombelona velona momba an’i Jesoa Kristy isika tsirairay avy satria miorina tsara ny fanantenantsika an’i Kristy, satria isika tsirairay dia manana fahafahana hanome valiny mampahery momba ny fanantenantsika. Taorian’ny nitoraham-bato an’i Stefana noho ny fitoriany momba an’i Jesoa Kristy, dia nisy fanenjehana lehibe izay nisy fiantraikany lehibe kokoa teo amin’ny fiangonana voalohany. Nandositra an’i Jerosalema avokoa afa-tsy ny apostoly (Asan’ny Apostoly 8,1). Na taiza na taiza nalehany dia nitory ny teny sy “nitory ny filazantsaran’i Jesosy Tompo” (Asan’ny Apostoly). 11,19- iray).
I Luke dia nandoko ny sarin'ny lehilahy sy vehivavy kristiana maro nandositra an'i Jerosalema noho ny finoany an'i Jesosy Kristy. Tsy azo nampanginina izy ireo, na dia notandindomin-doza ny ainy aza! Tsy maninona na loholona na olon-tsotra izy ireo - samy nijoro ho vavolombelona momba an'i Jesoa Kristy ny tsirairay tamin'izy ireo. Rehefa nandehandeha izy ireo dia nanontaniana ny antony nandaozany an'i Jerosalema. Tsy isalasalana fa nilaza tamin'ny olona nanontany izy ireo.
Izany no vokatry ny Fanahy Masina; ity no fijinjana ara-panahy narehitry ny Pentekosta. Vonona hanome valiny ireto olona ireto! Fotoana nampientam-po io ary tokony hanjaka ao am-piangonana io hafanam-po io ihany ankehitriny. Ny Fanahy Masina iray ihany no nitarika ny mpianatra tamin'izany ary ny Fanahy iray ihany no mitondra ny fiangonana ankehitriny. Azonao atao ny mangataka fahasahiana mitovy amin'izany ho vavolom-belon'i Jesosy Kristy!